कसरी ट्रेन भाडा मा मुद्रा बचत गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा सल्लाह > कसरी ट्रेन भाडा मा मुद्रा बचत गर्न
देश देश यात्रा, वा शहर शहर, यो सबै भन्दा राम्रो तरिका को एक एक साँच्चै अचम्मको अनुभव र voyaging रेल द्वारा छ. युरोपेली रेल भाडा हदसम्म यात्रा दूरी आधारित छन्, तथापि, airfares जस्तै - - धेरै युरोपेली रेल कम्पनीहरु अब एक गतिशील मूल्य निर्धारण प्रणालीमा सरेको छ जसमा एक भाडा माग गरेको आधारमा उतार चढाव गर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिबन्ध, वा कसरी प्रारम्भिक तपाईंले खरिद. चाहे तपाईं अस्ट्रिया यात्रा गर्ने योजना, बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, वा इटाली, पहिले एक सानो अनुसन्धान तपाईंको रेल यात्रा साँच्चै आफ्नो बजेट सुत्छन् मदत गर्न सक्छ. यहाँ छन् शीर्ष सुझाव मा कसरी रेल भाडा पैसा बचत गर्न तपाईंको यात्रा.
उपलब्ध भएमा, अग्रिम ट्रेन टिकट सामान्यतया बिक्री मा जान6अगाडिका यात्रा समय महिना. तथापि, अझै पनि सक्छ अघि पनि बस सप्ताह को एक जोडी बुकिंग तपाईं सुरक्षित पैसा को पर्याप्त रकम, त्यसैले कुनै पनि समय बर्बाद छैन!
तपाईं यात्रा गर्न चाहेको वर्ष को समय संग लचिलो हुन
तपाईं यात्रा गर्न अक्सर ठूलो बचत परिणाम हुन सक्छ चाहनुहुन्छ जब संग लचिलो भएर. रेल टिकट मूल्य चुचुरोमा समयमा वृद्धि छुट्टी सिजन केही युरोपेली देशहरूमा. यो वरिपरि सामान्यतया छ गर्मी महिना, विशेष जुलाई र अगस्ट मा.
तपाईंले यी महिना को बाहिर यात्रा गर्न विकल्प छ भने, टिकटहरू खरीद गर्न धेरै सस्तो हुन सक्छ. पनि, छुट्टीको समय जस्तो क्रिसमस र इस्टर, चोटी समय हो - जब जाँच गर्नुहोस् विद्यालय बिदा छन् र यी जोगिन प्रयास.
आफ्नो टिकट Rebook – रेल भाडा पैसा बचत
मात्र तपाईंले आफ्नो खरीद पछि भाडा चाँडै गिरा कि हेर्न के तपाईं कहिल्यै रेल टिकट बुक छ? ट्रेन टिकटको मूल्यमा उतार चढाव हुन्छ – मा अक्सर उही दिन. यस कम्पनीको रद्द नीति आधारमा, तपाईं सामान्यतया रद्द गर्न सक्नेछ र तपाईं भित्र कार्य भने तल्लो दरमा आफ्नो रेल पुन बुक 24 आफ्नो मूल खरिद घन्टा.
पेरिस बिअरिट्ज गाडिहरु गर्न
बिअरिट्ज गाडिहरु गर्न लियोन
केही रेल कम्पनीहरु आफ्नो रद्द समय अवधि अरू भन्दा बढी लचिलो छन्. केही अवस्थामा, तपाईं 24 घण्टे विन्डो बाहिर आफ्नो टिकट रद्द गर्न सक्नुहुन्छ. अर्को टिकट खरिद गर्नु अघि आफ्नो वाहक वेबसाइटमा जाँच गर्न आफ्नो नीति मा पढ्न महत्त्वपूर्ण छ. नयाँ रेल मूल्यहरु लागि चित्रमाला राख्न निश्चित र तल्लो दरमा आफ्नो टिकट rebooking पैसा बचत.
छूट फाइदा लिन – कसरी रेल भाडा पैसा बचत गर्न
केही युरोपेली रेल मार्गहरू बच्चाहरु को लागि महत्वपूर्ण छूट प्रस्ताव, विद्यार्थी, र वरिष्ठ यात्रीहरू. तीन एघार गर्न को उमेर देखि बच्चाहरु साधारण बन्द राम्रो प्रतिशत प्राप्त, को उमेर मुनिका बच्चाहरु गर्दा3सामान्यतया नि: शुल्क यात्रा. विद्यार्थी र वरिष्ठ छूट ट्रेनहरू र तपाईं यात्रा गरिरहनुभएको गन्तव्यको आधारमा उपलब्ध हुन सक्छ. यो तपाईं एक छुट टिकट खरिद यदि सबै समय मा तपाईं आफ्नो विद्यार्थी वा वरिष्ठ कार्ड छ महत्त्वपूर्ण छ.
विभिन्न युरोपेली रेल नेटवर्क भर उपलब्ध छुट भाडा प्रशस्त छन्. बनाउन सधैं निम्न द्वारा नवीनतम छूट लागि चित्रमाला राख्न निश्चित हाम्रो फेसबुक र twitter पृष्ठ.
आफ्नो मनपर्ने युरोपेली शहर मा एक रेल लिएर सोच? जाऊ त्यहाँ हाम्रो वेबसाइट saveatrain.com हाम्रा सबै विशेष भाडा जाँच र आफ्नो अर्को साहसिक योजना सुरु गर्न!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-save-money-on-train-fares%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, र तपाईं / यो वा / डे र अधिक भाषा गर्न / ES परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
savemoney रेल यात्रा Travelingtips traveltips